JAHAWAREERKA JUBBALAND: Kuwa xilka haya & kuwa u xusul duubayaba XIKMADI kama muuqato! | Hadalsame Media
Home Maqaallada JAHAWAREERKA JUBBALAND: Kuwa xilka haya & kuwa u xusul duubayaba XIKMADI kama...
JAHAWAREERKA JUBBALAND: Kuwa xilka haya & kuwa u xusul duubayaba XIKMADI kama muuqato!
(Hadalsame) 16 Agoosto 2019 – Haddii aan ka qiyaas qaadano jawiga siyaasadeed iyo kan amaan ee hadda ka jira Kismayo, iyo sidii wax u dhacayeen dhowrkii bilood oo la soo dhaafay, gaar ahaan tallaaboyinkii amar ku-taaglaynta ahaa ee uu qaaday Axmed Madobe oo uu ku dhisay guddiga doorashooyinka, xulashada oday dhaqameedyada iyo xilidhibaanada ay odayaashashi soo xuleen, ku gacan sayridda talooyinkii Amisom, IGAD, iyo ergayga qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya.
Talooyinkaas oo ahaa in doorashadada dib loo dhigo si murashixiinta oo dhammi ay uga qayb galaan, in doorashadu noqoto mid loo wada siman yahay oo u dhacda hab madaxbanaan oo daah furan, kaas oo amaanka tartamayaasha ay sugayaan ciidamo ka madax banaan fara gelin shiyeeye iyo mid siyaasadeedba, waxa suuragal ah inuu dhaco isku dhac ciidan oo dhiig ku daato isla markaana gaysta khasaare iyo bur-bur hanti dadwayne iyo mid dawladeed labadaba.
Maxaa Axmed Madoobe lagu eedaynayaa? Waxa lagu eedaynayaa:
Previous articleDAAWO: Ilhaan Cumar oo ka jawaabtey diidmada gelitaanka Israel & taageero ay ka heshay ururka ugu wayn Yuhuudda
Next article”Iib ma nihin!” – Denmark oo ka xanaaqdey war uu Trump ku sheegay inuu iibsanayo qayb dhulkooda ka mid ah!!